'हामी मुद्दामा आधारित पार्टी हौं, सबै मधेसी मधेसी पार्टीमै लाग्नुपर्छ'
२०७५ बैशाख १७ गते १२:२३
सर्लाही । बैशाख महिनाको मध्य समय चलिरहेको छ । न कुनै अवसर न कुनै निर्वाचनको बेला । तर पनि सवै भन्दा बुढो पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई त्याग्दै धमाधम राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा प्रवेश गर्नुलाई यहाँहरु के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले गलत बाटो हिँडिरहेको छ या त जनलहर अन्तै बढ्दो छ । सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ मा पनि यस्तै भएको छ । सो क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस ... read more...
महिला शसक्तिकरणको लागि सामुदायिक मेला
२०७५ बैशाख १५ गते ११:०३
सिन्धुपाल्चोक । महिला शसक्तिकरणका लागि ‘सहि हो’ अभियानले सामुदायिक मेला आयोजना गरेको छ । महिला हिंसा अन्त्य र लैंङ्गिक समानताका लागि ‘सहि हो’ अभियानमा मेरो समर्थन उनलाई भन्ने मुल नारासाथ आएको सामुदायिक सारथीको आयोजनमा मेला सम्पन्न भएको हो । मेलाको कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री शेरवहादुर तामाङले उद्रघाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तामाङले पैतृक सम्पत्तिमा ... read more...
सर्लाही । नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाही शाखाको आयोजनामा दुई दिने पत्रकारिता तालिम सम्पन्न भएको छ । सुरक्षा र न्याय मामिलाका मुद्दामा आधारित पत्रकारिता तालिम यूकेएडको आर्थिक सहयोग र सर्च फोर कमन ग्राउण्डको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो । तालिममा पत्रकारको आधारभुत गुण, क्षमता विकास, पत्रकारिकताको मापदण्ड, मिडियाको परिभाषा, भूमिका, खोजपत्रकारिता, फिचर लेखन, द्वन्द र हिंसा, शान्ति तथा द्वन्द, संवेद ... read more...
मध्यपुर थिमीका मेयरमाथि सांघातिक आक्रमण
२०७५ बैशाख ८ गते १९:०९
भक्तपुर । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । वडा नम्बर ३ स्थित मेयर श्रेष्ठको निवास अगाडि नै आरवानफाइभ बाइकबाट आएका अज्ञात ब्यक्तिले रडले हानेर घाइते बनाएको बताइएको छ । घाइते श्रेष्ठको मध्यपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको हात र खुट्टामा चोट लागेको पारिवारिक सदस्यले बताएका छन् । उनी सवार हरियो रंगको फोर्ड गाडिसमेत तोडफोड भएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन् ... read more...
मोष्ट वान्टेड सांसद दीपक मनाङे स्वयम्भुबाट समातिए
२०७५ बैशाख ६ गते २१:२२
काठमाडौं । इन्टरपोलबाट रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएका फरार प्रदेशसभा सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे पक्राउ परेका छन् । उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको टोलीले आज स्वयम्भुबाट पक्राउ गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट चक्रे मिलनको ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनी फरार भएका थिए । मनाङ प्रदेश सभाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारमा उनी निर्वाचित भएका थिए । काठमाडौं प्रहरी परिसरले उनी पक्राउ परेको पुष्टि ... read more...
हेटौडा । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तरुणको हातमा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको बताएका छन् । सोमवार ३ नम्बर प्रदेशको तरुण भेला तथा प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,‘पार्टीलाई बलियो बनाउन पार्टी निकट भातृ सगंठनहरुको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । सवैले आ– आफ्नो ठाउँबाट पार्टीलाइ अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।’ उनले बाम गठबन्धन सरकारले जनताको हितमा कहिल्यै ... read more...
यसरी मनाइयो नेपालगञ्जमा नेपाली झण्डा महोत्सव
२०७५ बैशाख १ गते २१:१५
नेपालगञ्ज । अन्तराल नामक गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा यहाँ नेपाली झण्डा महोत्सव मनाइएको छ । महोत्सवमा सहभागीहरुले नेपाली झण्डा फरफराएका थिए । त्यस अवसरमा नेपाली राष्ट्रियता झल्किने सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली झण्डा महोत्सव आयोजनाका परिकल्पनाकार एवं अन्तरालका कार्यकारी निर्देशक जयनारायण शाहले नेपाली राष्ट्रिय झण्डा बुद्ध ... read more...
एकाविहानै बम आतंक: क्रसर उद्योगमा विप्लव समूहको आगजनी
२०७५ बैशाख १ गते ०८:५१
काभ्रे । नयाँ बर्षको पहिलो दिन सुरु हुन नपाउँदै काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर-६ स्थित रहेको एक क्रसरमा विहान २ बजे नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले आगजनी गरेको छ । नेपाल काँग्रेसका नेता एवं ब्यवसायी कुनसाङ लामाले सञ्चालन गरेको ब्लु साइन स्टोन क्रसर उद्योगमा भएको आगजनीमा चार वटा ट्रिपर, दुई वटा स्काभेटर र एक जेसीबी पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट विहान ... read more...
म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–१ आनन्दबगरमा अबैध रुपमा कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य बस्तीको उत्खनन र चोरी निकासी भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायको अनुमतिविना उपकरणको प्रयोग गरेर नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेर चोरी निकासी भएको हो । नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आनन्दबगरमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासीका लागि कसैले पनि अनुमति नलिएको र ... read more...
अहिलेसम्मकै हाईप्रोफाइल बाल यौन दुराचारी पिटर काभ्रेमा समातिए
२०७४ चैत्र २५ गते २१:०२
काठमाडौं । बाल यौन दुराचारको आरोपमा एक हाईप्रोफाइल क्यानेडियन नागरिक पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाली बालबालिकाहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी बाल यौन दुराचार गरेको विशेष सूचना पाएसँगै ब्यूरोको टोली अनुसन्धानमा खटिएको थियो । सोही क्रममा ब्यूरोको टोलीले शनिबार विहान काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका वडा नम्बर-१ स्थित चिलकाजी महर्जनको घरबाट क्यानेडियन नागरि ... read more...
बल्ल नियन्त्रणमा आयो भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लागेका आगो
२०७४ चैत्र २५ गते १२:३५
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ८ स्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ । बिहान ४ बजेदेखि शुरु भएको आगलागी झण्डै चार घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक केशवकुमार भट्टराइले जानकारी दिएका छन्। सुपरमार्केटको पाँचौँ तलाको इलेक्ट्रोनिक्स कक्षबाट शुरु भएको आगो क्रमशः सबैतिर फैलिएको थियो । आगलागी नियन्त्रणमा बुटवल उपमहानगरपालिका, सिद्धार ... read more...
कञ्चनपुर । भारतमा बेचिएकी कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ सिसैयाकी ३२ वर्षीया तारा कामीले आफू घर फर्कने कुरा सपनामा समेत चिताएकी थिइनन । पन्ध्र वर्षकै कलिलो उमेरमा घर नजिकैको झलारी बजारमा किनमेल गर्न गएका बखत नशालु पदार्थ खुवाएर सशस्त्र द्वन्द्वको मौका छोप्दै विसं २०५८ मा दलालहरुले अपहरण गरी उनीलाई भारत पुर्याएर बेचेका थिए । “यहाँबाट लगेपछि कोठामा थुनेर राख्थे, होशमा आउने बित्तिकै न ... read more...
नगरप्रमुखलाई २५ लाख रुपैयाँ फिरौती माग्ने बैठा प्रहरीको खोरमा
२०७४ चैत्र २० गते १०:००
सर्लाही । हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईंलाई फोनबाट पच्चीस लाख रुपैयाँ फिरौती रकम माग गर्ने मुख्य योजनाकार प्रमोद बैठा पक्राउ परेका छन् । बैठालाई सर्लाही प्रहरीले मलङ्ग्वा नगरपालिका वडा नं.-८ बाट आइतबार पक्राउ गरेको हो । २६ वर्षीय बैठाले मेयर प्रसाईंसँग २५ लाख रुपैयाँ फिरौती रकम माग गरेका थिए । सर्लाही प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजेश थापाका अनुसार बैठाले सर्लाही क्षेत्र नं. ४ (क) को विधायक बिरेन् ... read more...
सिन्धुपालचोक । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पदभार सम्हालेका निर्वाचित जनप्रतिनिधी र स्थानीय तहमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेको विभिन्न कामको अनुगमन थालिएको छ । पारस्पारिक जवाफदेहिता र सुशासनको लागि यूएसआइडीको सहयोग र एफएचआई ३६० को सहकार्यमा सामुदायिक सारथीले सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन थालेको हो । जनताले सथानीय तहबाट पाउँनुपर्ने सेवा सुविधा, नगरपालिकाका हरेक वडामा भएका स्व ... read more...
षष्ट्रिका बस्नेत सूचना अधिकार पुरस्कार दाहाललाई
२०७४ चैत्र १७ गते ०९:३५
विराटनगर । नेपाल पत्रकार महासंघको ६३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित षष्ट्रिका बस्नेत सूचना अधिकार पुरस्कार–२०७४ महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तारानाथ दाहाललाई प्रदान गरिएको छ । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले पत्रकार दाहाललाई ५१ हजार रकमसहितको 'षष्ट्रिका बस्नेत' सूचना अधिकार पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । सो अवसरमा सञ्चारकर्मी एवं सुचनाको हक अधिकारकर ... read more...
एक महिनाभित्र सबै ठाउँमा कर्मचारी पुगिसक्ने: मन्त्री पण्डित
२०७४ चैत्र १६ गते १९:३२
सर्लाही । नयाँ संरचना अनुसार अबको एक महिनाभित्र सबै ठाउँमा कर्मचारी पुगिसक्ने दावी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले गरेका छन् । मन्त्री पण्डितले अपुग भएको ठाउँमा प्रविधिमैत्री र सक्षम नयाँ युवा जनशक्ति नियुक्ति गरेर भएपनि जनताको सेवा र विकासलाई गति दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री पण्डितले जनताको सेवा सुबिधा प्रभावित हुनेगरी दक्ष जनशक्तिको बिदाई नगरीने समेत बताए । आज ... read more...
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवना डंगोलले बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन माग हुनुपर्ने माग राखिन् । उनले भनिन्, 'बालिका बलात्कार जस्तो अमानवीय क्रियाकलाप गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ ।' उनले नेपालमा पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक विचलन बढेको भन्दै चिन्तासमेत ... read more...
पाँचथर । नेपाल पत्रकार महासंघ पाँचथर शाखाको आज बसेको वैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । शाखाले स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान तथा पत्रकारिता पुरस्कार-२०७५ बाट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाललाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिक स्वतन्त्रताका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई वर्षेनी प्रदान गरिने स्वतन्त्रता सेनानी सम्मानबाट यसअघि महासंघका ... read more...
जुवा घरबाट १ लाख ४२ हजार रुपैयाँसहित १० जना जुवाडे पक्राउ
२०७४ चैत्र ९ गते १९:२९
ललितपुर । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले अवैध जुवा खेल्ने तथा खेलाउने गरी १० जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । विहिबार एकान्तकुनास्थित डिबी महर्जनको घर भाडामा लिएर जुवा खेलेको एवं खेलाएको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । महर्जनको घर भाडामा लिई तामाङले अवैधरुपमा जुवा खेलाउने गरेको सूचना पाएपछि परिसरको टोली छापा मार्न त्यहाँ पुगेको थियो । प्रहरीले उक्त घरमा छापा मार्दा अवैध रुपमा तास खेलिरहेका १० जन ... read more...
सरकारी आवास गृह नहुँदा हिंसाबाट पीडित महिला अलपत्र
२०७४ चैत्र ८ गते ०९:४४
ललितपुर । अलपत्रमा परेका महिला र बालबालिकालाई राख्न सरकारी आवास गृह नहुँदा महिला प्रहरी हैरान भएका छन् । आवास नहुँदा उनीहरुलाई एक,दुई रात ब्यारेकमा नै राख्नुपरिरहेको महिला सेलकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चञ्चला श्रेष्ठ बताइन् । स्थानीयवासीले बाटोबाट हामीकहाँ ल्याएपछि गैरसरकारी संस्थामा पठाउन खोज्छौ तर गैरसरकारी संस्थाले कहिले आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने, कहिले खाली नभएको र कहिले कार्यालय समयमा मात्रै लिनस ... read more...